Babylon Professional - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Babylon Professional 7.0.0.13
Babylon 7, an easy and intuitive translation and dictionary software in over 50 languages. With Babylon 6, text translation has never been easier, no more "copy/paste" or unnecessary browser windows.
- Translations in 50 languages
- Spelling Alternatives.
အောက်မှာ download ယူပါ။
Babylon Pro v8.0.0.r20
Last edited by tu tu; 06-06-2009 at 11:31 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ kothu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မေဦးမွန်, Blackbrother, Desert Fox, hanhtun, khoungchee, komyo2010, mttwin, naymyo, phoetharlay, thureinsoe, zo
Babylon Professional v7.0.2.3 + Oxford Dictionary
Last edited by tu tu; 28-08-2008 at 11:34 AM.. Reason: လင့်ခ်သေနေလို့
ပဲပြုတ်, Blackbrother, phoetharlay
ပြန်စာ - Babylon Professional v7.0.2.3 + Oxford Dictionary
ဒီ.. ဘေဘီလုံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုတော့ ကျနော်သဘောကျတယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။ သူ့အဘိဓာန်ထဲကတင်မက... wiki , oxford နဲ့ တခြားနာမည်ကြီးအွန်လိုင်းအဘိဓာန်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ စကားလုံးရဲ့အဖြေတွေကိုရှာပေးတာ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာစကားအလိုက် စကားလုံးအသစ်တွေကိုလည်း ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်သေးတယ်။ ကျနော်ဒီတစ်ပတ် အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ ပဒုမ္မာဖိုရမ်က အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဘေဘီလုံဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက် အခမဲ့ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရလို့ လိုက်ရှာပြီးသုံးကြည့်တော့ သိပ်မဆိုးတာတွေ့ရပါတယ်။ အပြည့်စုံကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်မှာဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါတယ်။ .bgl extension (Babylon Glossary File) အမျိုးအစားပါ။ မူရင်းဘေဘီလုံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသွင်းပြီးရင် ပဒုမ္မာဖိုင်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။
Padonmar English-Myanmar Dictionary (Babylon Extension)
Credits to www.padonma.com
မထက်, မောင်ကို, နိုးတူး, Blackbrother, phoetharlay
.bgl extension (Babylon Glossary File) အမျိုးအစားပါ။ မူရင်းဘေဘီလုံဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသွင်းပြီးရင် ပဒုမ္မာဖိုင်ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။
ကိုပိုင်ရေ .... ကျွန်တော်လုပ်တာ မရလို့ဗျာ ...
Failed to open the dictionary file ဆိုတဲ့ error တက်နေပါတယ် ။
ပို့စ်5ခုအတွက် 40 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Babylon 8 (Pro) ပါ
Babylon 8 (Pro) Dictionary ပါ.....
ဖိုင်ဆိုဒ်က 12.08 MB ပါ...
အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ်/ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ...ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ကနေ အခြားဘာသာတွေကို အဘိဒါန်ပါပါတယ်..
ပြီးတော့ ငွေလဲနှုန်းပါပါတယ် ( အပ်ဒိတ်လုပ်ချင်ရင်တော့ အွန်လိုင်းချိတ်ပြီးလုပ်ပါဗျာ)
သူ့အင်စတောလ်လုပ်နည်းမှာ မပါတာတစ်ခုက ကျနော်ထည့်ပေးထားတဲ့ Padoma Dictionary (padonma-eng-bur)ကို ထပ်ထည့်ပေးပါ
(တစ်ခုရှိတာက လိုင်စင်တင်ရင် စတင်ချိန်မှာ အွန်လိုင်းချိတ်ထားရပါမယ်)
:28:[B]I wanna live till I die......no more, no less[/B].:28:
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ Nargis အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, ဇော်ဇော်, အောင်ကျော်ဆန်း, amaung344, aungphyo, aungzaw, bonge, phoetharlay, tintlwin, tree lover
Visit Nargis's homepage!
Find More Posts by Nargis
16-08-2009, 03:20 PM
Babyon ကိုဖွင့်ပြီး Options ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Dictionaries အောက်က Install Dictionaries from Disk ရွေးပြီး Padoma ဖိုင်ရှိတဲ့နေရာကို ရွေးပေးပြီး Open ကိုနှိပ်လိုက်ရင် မြန်မာ Dictionary ပါ Install လုပ်ပြီးဖြစ်သွားမှာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mudcloud အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by mudcloud
Babylon.v8.0.2 Dictionary လေးပါ
Babylon Pro is the world’s leading dictionary and language translation software. Babylon offers you the most intuitive tool for all your translation needs. With Babylon you can quickly translate emails, web pages, documents, instant messages, and more. All you have to do is click on the word or text that you want to translate andasmall window instantly appears with the desired results from Babylon’s extensive database of language dictionaries, glossaries and conversion tools.
ဒီလင့် လေးမှာ ယူလို့ရပါတယ် http://www.mediafire.com/?ghmwqgmzmym with Activate Key
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ blackghost အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မထက်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, Oliveway
ပြန်စာ - Babylon.v8.0.2 Dictionary လေးပါ
ကို blackghost ရေ.......ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဖိုင်လေးထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်နော်........ဒါလေးက တော်တော်လေးသုံးလို့ ကောင်းပါတယ်........သူက ကိုယ်ပြန်ချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစာလုံးပေါ်ကို......Ctrl + right click ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ.......အခုကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဖိုင်လေးက English-Myanmar Babylon ဖိုင်ပါ........ကို blackghost တင်ပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို Run ပြီးတာနဲ့ .....အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့.........ဖိုင်လေးကို Run လိုက်ရင် ......အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပြန်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ......ရှိပြီးသားဖြစ်နေရင်လည်း ဆောရီးပါခင်ဗျာ.......
ဖိုင်လေးကတော့ ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါခင်ဗျာ......
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဆန်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, ကျော်ထက်ချိန်, aungphyo, bonge, phoetharlay
ပြန်စာ - Babylon Professional
အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဘေဘီလုံ ဖိုင်ကို ဘယ်လိုထပ်ဖြည့်လို့ ရနိုင်မလဲသိချင်ပါတယ်
ရတဲ့အချိန်လေးမှာ ထပ်ဖြည့်ထားပြီး ပြန်ရှဲပေးနိုင်ယင်ကောင်းမလားလို့ပါ..
file expired တဲ့ဗျာ လုပ်ကြပါဦး။.........................................
17-02-2010, 05:32 AM
အကိုဘေဘီလုံဆော့ဝဲကို run ထားပါတယ် path file တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေ့မယ်သူက ၁၅ ရက်လောက်နေရင်လက်ဝါးကြီးထောင်ပြီးတော့ပိုက်ဆံတောင်းနေပါတယ် ...ညီလေးလည်းအစတော့လိုလို့ဆိုသုံးသေးတယ်နောက်တော့ပိုက်ဆံကတောင်းသေးတယ် တင်တော့လည်းခဏလေးနေရင်ပြုတ်ကျတာနဲမသုံးတော့တာ သုံးချင်လို့ပါဖြစ်နိုင်၇င် ဘေဘီလုံးကို ခရစ်ချိုး၇တယ်ပြေားတယ်ပြေားလိုကြားဖူးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသိတဲ့သူများရှိရင်ပြေားပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ စောင့်နေမယ်နော် ကျန်တာအားလု့အဆင်ပြေပါတယ် ဘယ်လို run ရင်ပိုက်ဆံမတောင်းဘူးလဲ ဆိုတာလေးရယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ၇ယ်ပြေားးပေးကြပါခင်ဗျာစောင့်မျှော်နေတယ်နော်အစ်ကိုတိုရဲ
Last edited by phoetharlay; 15-09-2010 at 12:33 AM..
ကျနော်ကတော့ Babylon7 သုံးတယ်.. ခု စက်မှာတင်ထားတဲ့ babylon ကို ဖြုတ်ပါ..ဖြုတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်း
အကုန်ဖြုတ်ဖိုးလိုပါမယ်.. အဲလိုမဖြုတ်တပ်ရင်လည်း uninstaller နှင့်သာကစ်လိုက်.. ကျနော် run ဒါလေးကို
Babylon7setup.exe ကို double click နိုပ်လိုက်
language မှာ English ကိုရွှေး .. Next ကိုနိုပ်
ှုI want to try babylon ကိုရွှေး.. Next ကိုနိုပ်
software license agreement မှာ Yes ကိုနိုပ်
Quick installation ကို check ပေးပြီး Install ကိုနိုပ်
ပြီးသွားရင် setup complete မှာ Middle Mouse Button ကိုရွှေးပြီး အောက်မှာ email တခုဖြည့်ပြီး finish နိုပ်
middle click ရွှေးဒါက မသိတဲ့ စာလုံးဆိုရင် middle click နိုပ်ဒါနဲ့ တန်းပေါ်အောင်လို့လေ..
install လုပ်ဒါပြီးသွားလို့ Desktop ပေါ်မှာ babylon shorcut တွေ့ပါမယ်
အဲဒါကြောင့်မို့ icon tray လေးကို right click ထောက် exit ပေးလိုက်ပါ..
အဲလိုလေးမှ မသိရင် Desktop screen ရဲ့ညာဘက်နာရီနားလေးက icon လေးကိုပြောဒါပါ..
crack ချိုးမှာမို့လို့ icon ကို exit ပေးထားရမှာ..
crack folder ထဲက crack လေးကို copy လုပ်
install လုပ်ထားတဲ့ directory ထဲကိုသွား
directory ဆိုဒါလည်း C: ထဲက program files ကိုဆိုလိုဒါပါ..
အဲမှာ babylon ဆိုတဲ့ folder ကိုဖွင့်လိုက်ရင် babylon toolbar /babylon pro ဆိုဒါကိုတွေ့ရင်
babylon pro ကိုဖွင့် ပီး crack ကို paste လုပ်
လုပ်တဲ့အချိန်မှာ copy file မှာမေးပါမယ်.. copy and place လုပ်မလားလို့
ဒါဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ပိုက်ပိုက်မတောင်းဘူး..ခဏ ခဏ ဖြုတ်လိုက်တပ်လိုက် ဒုက္ခကလွတ်ပါပီ
ကျနော်တို့က ထပ်ပြီးတော့ Glossary folder ထဲမှာပါတဲ့ padonma-eng-bur.bgl တို့ဘာတို့ကို
double click လေးနိုပ်ပြီးထပ်ရမ်းပေးပါတယ်..အဲဒီ folder ထဲမှာ ပါတဲ့ တခြား language တွေကို run ပေးလို့
ရပါသေးတယ်.. အဲလို run ထားခြားအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုတလုံးရှာလိုက်ရင် အောက်မှာ မြန်မာလိုရော
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းခကို, phoetharlay, zo
အကိုလုပ်လိုက်အုံမယ်ဗျာ နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အရင်ကလည်းအဲလိုလုပ်ဖူတယ် မရလိုသာဗျာ ခုလည်းတင်တော့တင်ထားတယ်ဘယ်တော့ ပိုက်ပိုက်တောင်းအုံးမလဲမသိဘူး တောင်း၇င်တော့အကိုဆီကိုလွတ်လိုက်မယ်နော် ညီလေးအစ်ကိုတစ်ယောက်ပေးမယ်ပြောတယ်သွားယူ လိုက်ပါလိုလေ..ဟဲဟဲဟဲဟဲ ကျေးဇူပါအကိုရာ မိသာစုဖိုရမ်ဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ တကယ်မိတ်ဆွေစစ်တွေရှိတဲ့နေရာလေးပါပြသနာများတာတော့ ညီလေးအကျင့်ဖြစ်နေလိုပါဗျာနောက်လည်း ကူညီပါအုံးလိုတောင်းဆိုပါတယ်အစ်ကိုတိုရာ
Last edited by phoetharlay; 15-09-2010 at 12:36 AM..
26-03-2010, 01:41 AM
ပြန်စာ - Babylon 8 License key လိုချင်လို့ ပါဗျာ
Babylon universal patcher ဆိုတဲ့ ဖိုဒါလေးကို ဖွင့်လိုက်ပီး အထဲက patch file ကို double click နှိပ်လိုက်ရင် ပုံမှာပြထား သလိုပေါ်လာပါမယ်။ crack it ကိုနှိပ်ပီး c:\_program\_babylon ထဲက ဘေဘီလုံ ကမ္ဘာလုံးပုံလေးကို ရွေး open လုပ်ပီ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။
လို့ ပေါ်လာရင် အိုကေပါပီ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ သက်နိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
doesaya, naymyo, phoetharlay
26-03-2010, 03:45 AM
ဘေဘီလုံ(၈) ဖူးဗားရှင်းပါ.. ကျနော်လည်း အခုလက်ရှိ သုံးနေပါတယ်.. အဆင်ပြေပါတယ်..ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးကြည့်ပါ.. ဘာခရက် ၊ ပက် မှ မလိုတော့ စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဗျာ..
ကျွန်တော် ပုံတွေ ထည့်ပြီး မပြတော့ဘူးဗျာ..အဆင်ပြေပါစေ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, မင်းခကို, မထက်, မွန်သန့်, လမ်းပြကြယ်, bonge, hanwinnaing, hellboy, khaing king, khoungchee, KznT, lawliet, maJunior, Oliveway, phoetharlay, tree lover, tu tu, win zaw
30-11-2010, 11:27 AM
ဒေါင်းပြီး install လုပ်တာ register လုပ်ခိုင်းနေလို့ပါ။
30-11-2010, 11:31 AM
ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာကို ဒေါင်းတာ မရတာနဲ့ install လုပ်ရင်
Originally Posted by မထက်
မထက်ရေ အပေါ်ပို့စ်နံပါတ် (၁၅) မှာ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာ ကိုသုံးကြည့်ပါ..အဲ့ဒီမှာလည်း ပြောပြီးသားပါ..ဘာ ခရက် ၊ ပက်ခ်ျ မှ မလိုပါဘူး...မထက်အခုဒေါင်းပြီး ရီဂျစ်စတာတောင်းနေတဲ့ ဘေဘီလုံ (၈) ကို full version ပေးထားတာပါ...လက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်..
download babylon- 8
မထက်, hellboy, phoetharlay
install လုပ်လိုက်တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။install လုပ်တိုင်း
No access to <HKEY_LOCAL_MACHINE> ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင် မထက် အရင်အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ ဘေဘီလုံကို uninstaller တစ်ခုခုနဲ့ အရင်ဆုံး uninstall လုပ်လိုက်ပါအုံး..ပြီးရင် စက်ကို restart ချ... အဲ့ဒါပြီးမှ ကျွန်တော်ပေးထားတာကို အသစ်ပြန်တင်ကြည့်ပါ.. ဒီမှာ your uninstaller ရှိပါတယ်.. အဲ့ဒါလေးဒေါင်းပြီး အရင်ဆုံး ဘေဘီလုံကို uninstall လုပ်ပြီး အပေါ်မှာ ပြောသလိုသာ ဆက်လုပ်လိုက်ပါ..အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မထက်, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, hellboy, phoetharlay
အကိုတို့ အမတို့ရေ... ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Babylon 8 က ဘယ်လိုဖြစ်လို့ လဲ မသိဘူး... သုံးလို့မရတော့လို့ပါ...
"The current authorized Babylon software has stopped working" ဆိုပီးပေါ်နေတယ်...
ကို သက်နိုင် တင်ပေးထားတဲ့ ဒီပို့စ် ကနေယူထားတာပါ..
အရင် သုံးနေတာလည်း အကောင်းပါ... ၅ လလောက်ကြာလာပီးမှ အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ...
အခု လက်ရှိဟာကို uninstaller နဲ့ uninstall လုပ်ပီး ပြန်သွင်းလဲ အဲလိုပဲဖြစ်နေတယ်....
အဲဒါကြောင့် Babylon 8 crak or key file ပါပီးသားလေးကို ပြန်တင်ပေးကြပါလားဗျာ...
ကျွန်တော်အပေါ်မှာ လည်း ပြောထားပါတယ်...ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဘေဘီလုံက အဆင်ပြေပါတယ်...အပေါ်မှာ ကိုနိုးတူးဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်ပါ...ပို့စ်နံပါတ် (၁၅) မှာ ရှိပါတယ်.. ဒါမှမဟုတ် ကိုကေဇက် တင်ပေးထားတဲ့
အဲ့ဒီပို့စ်က ဘေဘီလုံကို သုံးကြည့်ပါလား... အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
နိုးတူး, bonge, hellboy, Oliveway, phoetharlay
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် install လုပ်ပီး သုံးတာ အရင်အတိုင်းပဲ ပေါ်နေလို့
ကိုဇော်ရဲပိုင် တင်ပေးထားတဲ့ ပို့ ၁၅ ကဟာကော ကို Kznt ပေးထားတဲ့ ဟာကော နှစ်ခုလုံး တခုချင်းဆီ uninstaller နဲ့ uninstall လုပ် ပြီးမှ install သွင်းပြီး သုံးတာ ပါ ...အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နိုးတူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုနိုးတူးရေ ကျွန်တော်လဲ ဘေဘီလုံနဲ့ ပြသနာတက်နေတယ်။ ဘယ်သူ့တင်ပေးတဲ့ ဘေဘီလုံမှကို အင်စတောလုပ်လို့ မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘေဘီလုံကို အင်စတောလုပ်လိုက်ရင် window crash ဖြစ်ပီး blue screen တက်လာပီး shut down ကျကျသွားတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုဇော်ရဲပိုင်ရေ . ကျနော်လည်း အကိုပေးထားတဲ့ ဟာလေးသုံးတာ အောက်ကပုံလိုဖြစ်နေပြီ. ဘာမှလည်း ဆက်လုပ်လို့ရဘူး ..ကြည့်ပေးပါအုံးဗျာ .
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျနော်လည်း အဲ့လိုဖြစ်ပီးသွားပါပီ ...
အရင်ဆုံး Uninstaller တစ်ခုခုနဲ့ ဖြုတ်လိုက် ပါ ...
အာက်ကပို့ စ် မှာ ကို Kznt တင်ပေးထားတဲ့ Babylon ပြန်တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပီ ...
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ yawnathan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဟိန်းသူအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, bonge, hellboy, phoetharlay
အားလုံးဘဲ sorry ဗျို့..နေ့ခင်းပိုင်း ဖိုရမ်ထဲ မရောက်သေးလို့... ဟုတ်တယ်..ပြောထားတာတွေတွေ့လို့ ကျွန်တော့်စက်က ဘေဘီလုံလေး ဖွင့်လိုက်ကာမှ ကို hellboy တို့ပြောသလို ရီဂျစ်စတာ လုပ်မယ်လို့ပြောနေတယ်.. ပထမနေ့တွေ သုံးနေတာ အကောင်းပဲ..အဲ့ဒါနဲ့ပဲ your unistaller နဲ့ ကစ်ထုတ်လိုက်ပြီး.. ကိုယောနသံ ပြောသလိုပဲ ကိုကေဇက်ပေးတာကိုပဲ ပြန်တင်လိုက် အဆင်ပြေသွားတယ်...ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာက crack file မပါဘူးလေ...အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တင်ပေးတာကို မသုံးပါနဲ့တော့..ခရက်ဖိုင်ပါတဲ့ ကိုကေဇက်တင်ပေးထားတာပဲ သုံးပါ..အဆင်ပြေပါတယ်...ဖြေပေးတာ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်..အားလုံးကို အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
နိုးတူး, bonge, hellboy, phoetharlay
အကိုတို့ရေ.. ကျွန်တော့်မှာတော့ ပြဿနာတက်နေပါတယ်...
ကို Kznt တင်ထားတဲ့ ဒီကောင်လေး ကို တင်ပီး သူပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ စတုတ္ထအဆင့်ဖြစ်တဲ့
"4. Run Babylon and Install Lic v8 ZWT"
အဲဒီ Lic v8 ZWT ကို install လုပ်တဲ့နေရာမှာ
"The licence information you entered was probably mistyped.
Please re-enter the user name and license code exactly as they appear in the license you received. (10)"
ဆိုတဲ့ box ပဲကျလာတယ်...
အထပ်ထပ်အခါခါ ဖျက်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်လုပ်နေတာလဲမရဖြစ်နေပါတယ်..
ဖျက်တဲ့အခါမှာ Your Uninstaller နဲ့ ဖျက်ပီး registry ထဲမှာပါ သေချာလိုက်ရှာပီး ဖျက်တာပါ...
C: ထဲက ဖိုင်အလွတ်ကိုပါဖျက်ပီး restart ချ ပြီးမှ ပြန်သွင်းလုပ်တာပါ..
ကိုyawnathan နဲ့ ကိုဇော်ရဲပိုင် ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.
အရင်တစ်ခါက ကျနော် ကိုကေဇက် တင်ထားတဲ့ ဟာသုံးဖူးတယ်ဗျ အထဲမှာပါတဲ့ ဖိုင်တွေက နည်းနည်းများသွားတာနဲ့ လူက လည်ထွက်သွားတယ်. လုပ်တာကတော့ လုပ်တယ် ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာဘူး အက်တစ်က မဖြစ်တော့ပြန်ဘူး.ကိုကေဇက်ကိုလည်း မေးရတာတွေများလို့ အားနာနေပြီ. အဲဒါနဲ့ ကိုဇော်ရဲပိုင်တင်ထားတဲ့ ဟာလေးဘက် လှည့်သွားပြန်ရော. အဲဒါလည်း သိပ်မကြာဘူး အပေါ်က ပြောသလိုဖြစ်ပြန်ရော.
အဲဒါ မနေ့ကရှာကြည့်တော့ အောက်ကကောင်လေး တွေ့လာတယ်. မဆိုးဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်. လောလောဆယ်တော့ အက်တစ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ . အခု ကိုနိုးတူး ပြဿနာတက်တုန်းဆိုတော့ ဒါလေးနဲ့ အဆင်ပြေမလားလို့ စမ်းကြည့်ပါအုံး . အထဲမှာ နှစ်ဖိုင်ပါပါတယ်. crack ရယ် ZWT license ဆိုတာရယ်. အင်စတောလုပ်မယ် . ပြီးရင် exit . ခရက်ကို copy paste မယ်. ပြီးတာနဲ့ ဘေဘီလုံကို ပြန်ဖွင့် ပြီးတာနဲ့ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ထဲက ZWT license ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲက zwt ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို double click ပါ. အဲဒါပြီးရင်တော့ babylon option ထဲက license ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာသွားကြည့်ပေးပါ . active ဖြစ်ကြောင်းလေးတွေကို ပြပါလိမ့်မယ်.. အဲဒါဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပါတယ်.(နားတော့ မရှုပ်လောက်ဘူးထင်တယ် )အထဲမှာလည်း text ပါပါသေးတယ် ...ကိုနိုးတူးရေ စမ်းကြည့်ပါအုံးဗျာ..
Babylon Pro v8.1.0.16
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ hellboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, phoetharlay, yawnathan
ခုတစ်လောမိသားစုထဲမှာ ဘေဘီလွင် (Babylon) တွေ Expire , Register , Buy , Purchase လုပ်ခိုင်းတာတွေကြီးပဲမြင်နေရလို့ ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုပြေကြအောင်ဆိုပြီးတွေမိတာနဲ့ ဒီပို့စ်
လေးကိုရေးဖြစ်သွားတာပါ အဆင်မပြေသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကျွန်တော်ဆွေးနွေးသလိုမျိုးလုပ်
ကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားမှာပါ ...။
မိမိကွန်ပျူတာတွင် Any Previous Version Of Babylon ရှိနေပါစေ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါ ဖြုတ်နည်းတွေကတော့
အများကြီးရှိပါတယ် မသိတဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးလိုက်ပါတယ် ။
Revouninstaller-Portable လေးကိုသုံးပြီး ဖြုတ်ချလိုက်ပါ ဖြုတ်ချပြီးပါက မိမိစက်တွင် Babylon ကတကယ်
မရှိတော့ဘူးလား ဆိုတာကို Drive (or) Partation (C:)\_Program Files\_Babylon မှာသွားစစ်ပါ မတွေ့တော့ဖူး
ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်နေရာကိုသွားစစ်ဖို့အတွက် Run Box ခေါ်ပါ (Window Key+R) ပြီးရင် Run Box တွင်
regedit လိုရိုက်ထည့်ပြီး Ok ပေါ့ Registry Editor ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် HKEY_CURRENT_USERS-->Software အောက်ကိုသွားပြီး Babylon Folder တွေကျန်သေး မကျန်တော့ဘူးလား စစ်ပေးပါ ။ စစ်ပြီးသွားရင် HKEY_LOCAL_MACHINE --> Software --> Babylon Folder ကျန်နေသေးလား စစ်ပါ ။ အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ Babylon နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဖိုင်ဒါတွေမတွေ့ဖူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တင်
ပေးထားတဲ့ Babylon Pro v8.1.0.r16 ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးတာနဲ့ Babylon ကိုရမ်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Internet Connection ကိုခဏပိတ်ထားပါမယ်။
ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Installation Process ကိုစတင်ရမ်းပါတော့မယ် ဦးဆုံး Babylon8_setup.exe ကို
ရမ်းလိုက်ပါ Custom Installation နဲ့ရမ်းပြီး Desktop မှာ Shortcut ထားမယ်ဆိုတာပဲ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပြီး
ကျန်တာတွေကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးဆက်ရမ်းပါ ။ Installation Process ပြီးသွားတာနဲ့ Taskbar မှာ Babylon Icon
အား Right Click ထောက်ပြီး Exit လုပ်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Crack Folder ထဲမှ Babylon.exe ဖိုင်ကို Copy ယူပြီး
(C:)\_Program Files\_Babylon Folder ထဲမှာသွားပြီး Paste လုပ်ပါ ။ လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် Desktop မှ Shortcut
ကို D-Click ခေါက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ ။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့အလွယ်တကူရှင်းပြသွားပါမယ် ။
အပေါ်ကပုံထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ Language Packs တွေကိုဒေါင်းဖို့အတွက် Internet Connection ကိုပြန်သွားလိုက်
ပါ ပြီးရင်စာဖတ်သူတင်ချင်သော Language Packs ကိုအလွယ်အကူဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး သွင်းလို့ရပါပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့
Babylon ကို Full Version အဖြစ် ဘာပြဿနာ အခက်ခဲ့မရှိပဲသုံးနှိုင်ပါပြီဗျာ ။ Babylon မှာ မြန်မာလိုမြင်ရဖို့အတွက်ကတော့ အောက်ကပုံလေးမှာဝိုင်းထားပြတဲ့ ဖိုင်လေး (၂) ခုကိုရမ်းပေးရမှာပါ ။
ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးအိုကေပါပြီ ။
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရင်း (စစ်တွေသားချေ) ။
အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင် အားမနာတန်းမေးမြန်းနှိုင်၏ ။
Last edited by စစ်တွေသားချေ; 12-12-2010 at 05:13 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ စစ်တွေသားချေ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဖန်နေ၀န်း, လမ်းပြကြယ်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, တောဂေါ်လီ, မောင်ကို, နိုးတူး, bonge, hellboy, khoungchee, kyaukphyu, Oliveway, phoetharlay, phyomyintthein, PoeHapGyi, psycho, yawnathan
Microsoft Visual Studio 2008 Professional tu tu Applications 8 06-03-2010 05:24 AM